Synphrine HCL ntụ ntụ (5985-28-4) hplc ma98% | AASraw Fat Loss
Synephrine HCL ntụ ntụ
/ ngwaahịa / Ọla abụba / Synephrine HCL ntụ ntụ
Rating: SKU: 5985-28-4. Category: Ọla abụba
AASraw nwere ikikere na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke Synephrine HCL powder (5985-28-4), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
Synephrine HCL ntụ ntụ bụ ihe a na-ahụkarị bụ alkaloid chemical compound hụrụ osisi ma wepụta maka iji dị ka mgbakwunye. Osisi mmanye bụ osisi synephrine kachasị ewu ewu ma nwee akụkọ ihe mere eme nke ya. Ọ bụ ezie na mmanụ oma dị ukwuu nwere ike iji ya mee ihe, a na-ejikarị synephrine ma jiri mụọ ihe maka mmetụta ya na nha na abụba.
Synephrine HCL akpụkpọ vidiyo
Synephrine hydrochloride ntụ ntụ bụ isi Characters
aha: Synephrine hydrochloride ntụ ntụ
Usoro Molecular: C9H14ClNO2
Molekụla arọ: 203.67
agba: White crystal powder
Synephrine (CAS 5985-28-4) Nyochaa
Gee ntị, ọ bụ ọchịchọ gị maka nri ndị na-eri ụra na-egbochi gị ịchọta ihe ngosi ahụ nke ịchọrọ ịchọta? Otu n'ime ihe ị ga-eme iji nweta ihe osise zuru oke bụ iji chịkwaa agụụ gị. Ozugbo i mere nke ahụ, ị ​​ga-emeri ọkara agha ahụ. E nwere ọtụtụ ọgwụ ọjọọ na ahịa nke a na-eme iji belata agụụ. Syneprin bụ otu n'ime ọgwụ ndị ahụ. Na nke a Ntụle Synephrine, ị ga-achọta ozi ndị na-enye aka banyere ọgwụ a nke ghọworo ihe a ma ama mgbe a bịara n'ịhazi njikwa.
Synephrine bụ ihe dị ike na-akpali akpali nke na-ere ọkụ ma ọ bụ agụụ-na-ebelata ihe. Ọ na-enyekwara ahụ gị aka ịkwado ezigbo metabolism. Njirimara ndị a na-eme ka Synephrine bara uru nke ukwuu maka ndị buru ibu ma buru oke ibu na-agbalị iji belata agụụ ma ghara ibu ibu. A na-erekarị ya n'ụdị nnu 'powdered' a kpọrọ HCL Synephrine.
A na-ahụkarị synephrine dị iche iche n'ụdị citrus dị iche iche. Ọ bụ ezie na ọ dị ugbu a na-atọ ụtọ na ilu oroma dị iche iche, ọ na-abawanye n'ụdị dị ilu. N'ime nnyocha e mere gbasara ihe karịrị mkpụrụ 50 na mkpụrụ osisi citrus ndị a kwadebere maka azụmahịa, a hụrụ synephrine (CAS 5985-28-4) n'ogologo site na 4-60 mg / L.
Njirimara Chemical nke Synephrine
ọgwụ AKỤKỌ ECHIKE Ọdịdị
Ọdịdị MOLEKUL FORMULA
Crystaline siri ike
CAS Number 94-07-5
Melting Point 162 ruo 164 Celsius C (324 ruo 327 ° F
Usoro ihe omume nke Synephrine
P-synfrine pụtara n'ụzọ nkịtị n'anụ ahụ mmadụ, ọ na - ejikarị enzymes na ụbụrụ a maara dị ka Monoamine oxidase enzymes. Ndị a na enzymes bụ otu ihe ahụ na-achịkwa ọkwa nke dopamine, serotonin, na norepinephrine.
A kweere na synephrine nwere ike imetụta akụkụ ahụ nke anụ ahụ ma mee ka ọnụọgụgụ nke ọnụ ọgụgụ dị elu, bụ nke nwere ihe ruru 70 pasent nke ụlọnga caloric kwa ụbọchị. Dị ka ọmụmụ, ihe a na-enyere aka na-eme ka ị na-eme ngwa ngwa, na-eduga ná njedebe abụba na nchịkwa arọ.
Synefrine dị ka pseudoephedrin na ephedrine, nke bụ ogige dị iche iche na-ahụ maka ụdị ọrịa allergy / ọgwụ oyi, na mgbakwunye ume, na mgbakwunye ọnwụ. Ihe ọma banyere synephrine bụ na ọ na-arụ ọrụ nke ọma na-eme ka ọnụọgụgụ nke ahụ ghara ịdị na-enweghị mmetụta ọ bụla na mgbali ọbara gị na ọnụ ọgụgụ obi gị. N'ihi nke a, a na-ewerekarị ya dị ka ụzọ kachasị mma maka ephedrine.
Synephrine nwere ogologo akụkọ ihe mere eme, a na-ejikwa ya dịka osisi ọgwụ na East Africa na Eshia nke ebe okpomọkụ ruo ọtụtụ narị afọ. Ọ dịwo anya eji ya mee ihe maka ọgwụgwọ, afọ ntachi, ọgbụgbọ, na nrịkasi obi.
Taa, Synephrine na-ejikarị eme ihe na-akpali akpali. Ọ na - eji ụbụrụ ụbụrụ na - agbọpụta ma na - akpali metabolism nke na - enyere aka ịchịkwa agụụ, karịsịa maka carbohydrates. Ozugbo ị na - ewe ihe mgbakwasị ụkwụ nke nwere synefrine, ị ga - enwe afọ ojuju ma rie obere, si otú ahụ jikwaa ahụ ike.
Ụzọ ọzọ nke synfrine si eme ka ọ ghara ịdị arọ bụ na ọ na-akpali thermogenesis ma kpoo ahụ gị ka ọ gbaa ọkụ abụba a na-achọghị. E wezụga inye aka na-aṅụbiga abụba ókè, mgbakwunye ahụ na-egbochi ịchekwa ahụ. Site na iri ihe mgbakwunye nke nwere ihe mgbochi a na-eme mgbe nile, ị ga-enwe ike idaba ngwa ngwa.
Nnyocha emewo ka njikọ dị n'etiti oké ibu na ịda mbà n'obi. Na mgbakwunye na inyere ndị obese na ndị buru oke ibu akafu arọ, synephrine achọpụtala na ọ bụ nkwalite ihu igwe. Nke a na-eme ka ọ bụrụ ihe bara uru nye ndị nwere nchekasị, ịda mbà n'obi, ma ọ bụ nsogbu ọ bụla metụtara ibu.
Synephrine (CAS 5985-28-4) Ụdị
Nye ọtụtụ ndị mmadụ, a na-atụ aro otu mkpụrụ osisi nke 10-20 milligrams ugboro atọ kwa ụbọchị. Ka o sina dị, a ga-atụ aro maka ụfọdụ ndị mmadụ usoro ọgwụ nke 50 milligrams (ọ bụ ezie na ọ bụghị ugboro atọ n'ụbọchị).
N'ime otu ọmụmụ, a hụrụ otu mkpụrụ ọgwụ nke 50 mg nke synephrine iji mee ka ọnụ ọgụgụ metabolic dị elu site na 65 calorie. Tupu ị na-eji synephrine, ọ kachasị mma ịkpọtụrụ dọkịta gị na usoro ọgwụgwọ ga-arụ ọrụ maka gị.
Dị nnọọ ka ọ dị ọtụtụ ihe mgbakwunye, ị gaghị achọpụta ihe dị ukwuu mgbe ị malitere iji synephrine. A pụghị ịhụ nsonaazụ kachasị mma mgbe ejirila ya mee ihe. Imirikiti ndị mmadụ na-akọ na nwetakịrị nta na ume na-enweghị mmetụta ọ bụla na-emetụta ya na ihe ndị na-akpali akpali, dị ka ịmị ọkụ ọkụ, ọgbụgbọ, jitters, wdg.
Nlezianya mgbe ị na-ewere Synephrine
Ejila ihe karịrị ụbọchị a na-atụ aro ya: Na-eme ọsọ ọsọ iji nweta nsonaazụ dị nro, enwere ike ịnwa gị ka ịrekwu synephrine karịa ọgwụ a tụrụ aro. Iji synfrine karịa nke a na-eme ka enwekwu mmetụta dịka isi ọwụwa na dizziness.
Ejikọtala synfrine na ihe ndị ọzọ na-akpali akpali: Synephrine bụ ihe dị ike nke na-akpali akpali, ya mere ijikọta ya na ihe ndị ọzọ na-akpali akpali nwere ike ịkpalite mmetụta dị oké njọ. Iji ya na components ndị ọzọ dịka PEA ma ọ bụ ephedrine nwere ike ịkpalite ihe ize ndụ ahụike dịka ịda mbà n'obi, ijide obi, na ọbara mgbali elu.
Ejila synefrine ma ọ bụrụ na ị nwere ọnọdụ ahụike dị ala: Ọ bụrụ na ị na-arịa ọbara mgbali elu, HIV / AIDS ma ọ bụ ọrịa ọ bụla ọzọ, ọ kachasị mma izere iwe synephrine. Nke a bụ n'ihi na mgbakwunye ahụ nwere ike iji mmekọrịta na / ma ọ bụ nwee mmekọrịta na ọgwụ ndị ị nwere ike iji na-emeso / ejikwa ọnọdụ gị.
N'ihi mmetụta ndị nwere mmetụta sitere na synephrine (5985-28-4) na ogige ndị ọzọ, ọ kachasị mma ịzụta ụdị dị ọcha nke Synephrine. Zere ndị na-ere ahịa na-eji fillers ma ọ bụ mix synephrine na nchịkọta dị ka ephedrine ma ọ bụ caffeine.
Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na Idoghachị na Synephrine
Ọ bụrụ na i tinyekwuo synephrine karịa ọgwụ a na-atụ aro kwa ụbọchị, ị nwere ike ịnweta ụfọdụ mmetụta mmetụta synephrin dịka obi ọkụ, ọrịa strok, isi ọwụwa, dizziness, wdg. Ọ bụrụ na ị na-atụgharị na synfrine, ọ dị mkpa ịchọ ozugbo ahụike ahụike. . N'aka nke ọzọ, ị nwere ike ịkpọ Ọdụ Nyere Poison na 1-800-222-1222.
Synephrine HCL ntụ ntụ Nchikota
Dika aturu anya site na ihe di nwayo nke na-eme ka enwekwuo metabolism, uru di n'ime synephrine supplementation bu ugwo ngwa ngwa. N'ijikọta nri kwesịrị ekwesị na mmega ahụ mgbe niile, synephrine nwere ike inyere gị aka inwe ahụ zuru oke ma zere nsogbu metụtara nsogbu dị ka ọbara mgbali elu, nsogbu obi, wdg.
Garcinia cambogia wepụ ntụ